Entertainment – Myanmar Live
March 4, 2020 March 4, 2020 - by arnakorn saengsiritrakun
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အခြေအနေကြောင့် မတ်လအတွင်းမှာ ပြုလုပ်မယ့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကို ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက မတ်လ ၄ ရက်မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ …
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားကြရဦးမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၂၈
February 28, 2020 February 28, 2020 - by peeraporn y.
ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲတွေ တန်းဆင်းဇုန်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူ ပရိတ်သတ် တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲတွေကတော့ပိုပြီး မြိုင်ဆိုင်လာ နေပြီးတော့အသင်း ၆သင်းလောက်က …
သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုအတွက် ဥပဒေဘောင်အတွင်းက အစွမ်းကုန်ကူညီမည်ဟု ဇင်ယော်မောင်မောင် ဆို
February 26, 2020 February 26, 2020 - by peeraporn y.
ငွေကြေးလိမ်လည်မှု ပုဒ်မ ၄၂၀ နဲ့ ရန်ကင်းတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် ကျခံဖို့အမိန့်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုအမှုအတွက် …
ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်မှာ အကယ်ဒမီရခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ထားခြင်းခံရလို့အရမ်းပျော်ရွှင်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ အကယ်ဒမီယွန်းယွန်း
February 19, 2020 February 19, 2020 - by peeraporn y.
ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်အတွင်းမှာ အရေအတွက်မများလှတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေ ရှိကြတဲ့အနက် ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ ချစ်စဖွယ်အပြုံးနဲ့ အမူအရာပီပြင်လှတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်လေးကတော့ အကယ်ဒမီယွန်းယွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …